News Archives - Land Of Punt
Nabi Maxamed scw ayaa inoo sheegay in Ibliis (Shaydaan) warbixin subaxeed/galabeed ka dhagaysto shayaadintakale ee u xilsaaran inay fasahadiyaan nabi Adam cs tafiirtisa. Dibindaabyada iyo dhibkaa Ibliis ladabasocdo biniadamka...
Monarchies-Ka Bariga Dhexe ee Sacuudig
Saudi Arabia, Boqortooyada sixun abaabulay agagaarka Sunni Islam oo hoy u ah kaydka saliidda labaad ee ugu weyn dunida, ayaa ku riyaaqay xiriirka saaxiibtinimo la West, gaar ahaan Maraykanka. UJEEDDADA BARASHADA Dib u eeg...
Basaaskii reer Masar ee badbaadiyey Yuhuuda.
Qoraa yuhuudi ah oo lagu magacaabo Yuri Bar-Joseph ayaa daaha ka qaaday mid kamida dhacdooyiinka basaasnimo ee taariikhda colaada Carabta iyo Yuhuuda. Muda hada laga joogo 43 sano kuna began sanadkii 1973 , markii uu dhamaaday...